सोया डी म्याक एबी इन्टर्नेट समूहको एक माध्यम हो जुन २०० 2008 देखि सबै पाठकहरूसँग समाचार, ट्यूटोरियलहरू, युक्तिहरू र विशेष गरी प्रविधि र विशेष गरी म्याकमा टेक्नोलोजीको बारेमा सबै हालको जानकारी साझा गर्दै आएको छ।
सोया डी म्याकमा हामी स्पष्ट छौं कि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीलाई भेट्न आउनेहरू र एप्पल र म्याकसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू वा सफ्टवेयरको बारेमा विस्तृत जानकारी खोज्न चाहने वा उनीहरूलाई विस्तृत जानकारी खोज्ने सबैको बारेमा साँच्चिकै भावनात्मक कुराको बारेमा सकेसम्म बढी जानकारी साझा गर्नु हो। प्रयोगकर्ता समुदाय दिन प्रति दिन बढ्दै छ र आज हामी भन्न सक्छौं कि हामी म्याकहरू र एप्पलमा सबै भन्दा प्रभावशाली मिडियामा छौं।
El सोया डी म्याकको सम्पादकीय टीम यो निम्न लेखकहरू मिलेर बनेको छ:
यदि तपाईं सोया डी म्याकको लेखन टोलीको भाग हुन चाहानुहुन्छ भने, यो फारम भर्नुहोस्.
२०१y देखि सोया डी म्याकमा संयोजक र एप्पल उत्पादनहरू उनीहरूको सबै सामर्थ्य र कमजोरीहरूको मजा लिदै। २०१२ पछि, जब पहिलो आईम्याक मेरो जीवनमा आएको थियो, मैले कम्प्युटरलाई यति धेरै रमाईलो गरीन। जब म सानो थिएँ मैले एम्स्ट्राड र एक कोमोडोर अमीगा पनि खेल्न र टिन्कर गर्न प्रयोग गर्थे, त्यसैले कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्सको साथ अनुभव मेरो रगतमा भएको कुरा हो। वर्षौंको बखत यी कम्प्युटरहरूसँग प्राप्त अनुभवको अर्थ यो हो कि आज म मेरो ज्ञान अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न सक्दछु, र यसले मलाई स्थिर शिक्षामा पनि राख्छ। तपाईं मलाई ट्विटरमा @jordi_sdmac को रूपमा फेला पार्नुहुनेछ
यो २००० को मध्यसम्म थिएन जब मैले मैक इकोसिस्टममा सेता म्याकबुकको साथ पाउनेछु जुन मसँग अझै छ। म हालै २०१ 2000 देखि म्याक मिनी प्रयोग गर्छु। मसँग यो अपरेटिंग प्रणालीको साथ १० बर्ष भन्दा बढी समयको अनुभव छ, र म ज्ञान साझा गर्न चाहन्छु जुन मैले मेरो अध्ययनको लागि र एक आत्म-सिकाएको तरीकामा धन्यवाद हासिल गरेको छु।
सामान्यतया टेक्नोलोजी फ्यान र विशेष गरी एप्पल ब्रह्माण्ड। मलाई लाग्छ म्याकबुक प्रोहरू एप्पलमा सब भन्दा राम्रो उपकरणहरू हुन्। म्याकोस को प्रयोग को सहजता को लागी तपाइँ नयाँ चीज को लागी पागल नहुनु को लागी प्रयास गर्ने क्षमता दिनुहुन्छ। टच बार सबै कम्प्युटरहरूमा अनिवार्य हुनुपर्दछ।
जबदेखि मेरो एप्पल वाचले मेरो जीवन बचायो, जॉब्स र वोजद्वारा सिर्जना गरिएको ब्रह्माण्डमा अंकित। म हरेक दिन मेरो iMac प्रयोग गरेर रमाईलो गर्छु, चाहे कामका लागि होस् वा रमाईलोको लागि। macOS ले तपाईका लागि सजिलो बनाउँदछ।
पेशागत मेडिकल र पेडियाट्रिसियन स्नातक। टेक्नोलोजीको बारेमा जोशिलो, विशेष गरी एप्पल उत्पादनहरू, मलाई "आईफोन समाचार" र "म म्याकबाट छु" को सम्पादक हुन खुशी छ। मूल संस्करणमा श्रृंखलामा अंकुश लगाइएको। पोचकास्टर एक्चुलीडेड आईफोन र एमपाडकास्टका साथ।
टेक्नोलोजी प्रेमी, विशेष गरी एप्पल उत्पादनहरू। म म्याकबुकको साथ अध्ययन गर्दै थिएँ, र हाल म्याक एक अपरेटि। प्रणाली हो जुन मसँग दैनिक रूपमा मेरो प्रशिक्षण र फुर्सदको समयमा आउँछ।
प्रविधि, खेल र फोटोग्राफी को बारे मा पागल। धेरै जस्तै, एप्पल हाम्रो जीवन परिवर्तन। र म जहाँसुकै मेरो म्याक लिन्छु। मलाई सबैको साथ अप टु डेट हुन मनपर्दछ, र म आशा गर्दछु कि यसले तपाईंलाई यस अपरेटिंग सिस्टमको मजा लिन मद्दत गर्दछ।
मिगुएल एन्जिल जुन्कोस
एक माइक्रो कम्प्युटर टेक्नीशियन मेरो शुरूदेखि नै, म सामान्यमा टेक्नोलोजीको बारेमा उत्साहित छु र विशेष गरी एप्पल र यसको उत्पादनहरू, जसको म म्याकबाट मोहित छु। म मेरो ल्यापटपको साथ दुबै काम र धेरै रमाइलो क्षणहरूको आनन्द लिन्छु।
मँ लाखौं मानिसहरु जस्तै एप्पल उत्पादनहरु को बारे मा भावुक छु। म्याक मेरो दैनिक जीवनको अंश हो र म यसलाई तपाईंकोमा ल्याउने प्रयास गर्छु।
येशू अर्जोना मोन्टल्भो
आईओएस र आईटी प्रणालीमा विकासकर्ता, हाल एप्पल अपरेटि system प्रणालीको बारेमा प्रत्येक दिन म आफैंलाई सिक्न र कागजातमा केन्द्रित छ। म म्याक सम्बन्धी सबै अनुसन्धान गर्छु र म यो खबरमा साझा गर्छु जुन तपाईंलाई अप-टु-डेट राख्दछ।
एप्पल संसार र खास गरी म्याकको बारेमा इलेक्ट्रॉनिक इञ्जिनियर जोसुकै, जो हाम्रो वातावरण सुधार गर्ने उपायको रूपमा नवीनता र टेक्नोलोजीमा शर्त लगाउँछन्। कहिल्यै नत्याग्ने र हरेक क्षण सिक्ने आड। त्यसैले म आशा गर्छु कि मैले जे लेख्छें ती सबै तपाईंलाई उपयोगी छन्।
सिक्नको लागि सँधै उत्सुक, म नयाँ टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित सबै कुरा र शैक्षिक क्षेत्र र शिक्षासँग उनीहरूको सम्बन्धलाई माया गर्दछु। म म्याकको बारेमा उत्साहित छु, जहाँबाट म सँधै सिक्दै छु, र संचार गर्दैछु ताकि अन्य व्यक्तिहरूले यस उत्तम अपरेटिंग प्रणालीको मज्जा लिन सकून्।
सामान्य मा टेक्नोलोजी को बारे मा भावुक, र विशेष गरी म्याक को दुनिया को बारे मा। मेरो खाली समय मा, म केहि परियोजनाहरु र वेब सेवाहरु को प्रशासन को लागी समर्पित गर्दछु जस्तै आईप्याड विशेषज्ञ, कोरोनाभाइरस तथ्या्क o IP ठेगाना, सधैं मेरो म्याक संग, जसबाट म दैनिक सिक्छु। यदि तपाइँ विवरण र यस अपरेटि system्ग सिस्टम को गुण जान्न चाहानुहुन्छ, मँ आशा गर्दछु कि तपाइँ मेरो लेख मनपर्छ।
लेखन र टेक्नोलोजी मेरा दुई जोडी हो। र २०० 2005 पछि मसँग भाग्य छ उनीहरूलाई मद्दत गर्न यस क्षेत्रको विशेष मिडियामा सहयोग गर्न, पाठ्यक्रममा म्याकबुक प्रयोग गरेर। सबै भन्दा राम्रो? म पहिलो दिन जस्तै मद्दत गर्न जारी रहन्छ कुनै पनि कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्दा जुन उनीहरूले यो अपरेटिंग प्रणालीको लागि रिलीज गर्छन्।
नमस्कार! मलाई अझै पनी याद छ, जब मैले मेरो पहिलो म्याक पाएँ, पुरानो म्याकबुक प्रो जुन त्यस समयमा मेरो पीसी भन्दा जेठो भए पनि यसले एक हजार पालो दिन्छ। त्यस दिनदेखि त्यहाँ पछाडि फर्किएन ... यो सत्य हो कि म पीसीहरूसँग कामका कारणका लागि जारी राख्छु तर मँ "विच्छेदन" गर्न र मेरो व्यक्तिगत परियोजनाहरूमा काम गर्न म्याक प्रयोग गर्न चाहन्छु।